Kooha 2.0.0 inowedzera rutsigiro rwematafura matsva uye MP4 | Linux Vakapindwa muropa
Kooha 2.0.0 inowedzera rutsigiro rwematafura matsva uye MP4
Kusvika pandinogona kurangarira, kubva pandakachinjira kuLinux ini ndinoshandisa SimpleScreenRecorder kurekodha komputa yangu. Ini ndinoramba ndichiishandisa, asi nekuti ini ndinosarudza iyo KDE desktop uye ichiri kushandisa X11 nekumisikidza uye ndichiziva kuti mune ramangwana, kana SSR ikasawedzera rutsigiro rweWayland, ndichafanirwa kutarisa dzimwe nzira. Mumwe wavo akakanda vhiki ino yekuvandudza kukuru, a Kooha 2.0.0 iyo inounza shanduko yeavo izvo zvisinganzwisisike kuti ivo vaive vasipo kubva pakutanga.
Chinhu chekutanga chavanotaura mune yavo runyora rwemashoko ndeyekuti maMP4 uye maGIF mafomati akawedzerwa. Kuti isu hatina kukwanisa kutumira vhidhiyo kuGIF kwaive kusakosha kwakakosha, asi MP4 yakapararira zvakanyanya uye zvakakatyamadza zvishoma. Kugadzirira kumirira zvishoma, Kooha 2.0.0 yakagadzirisawo zvikwata muGNOME 41, kuwedzera kune dzimwe shanduko dzakadai seinotevera.
Chii chitsva muKooha 2.0.0
MP4 uye maGIF mafomati akawedzerwa.
Iko kugona kurekodha hwindo rimwe chete kana cheki yakawedzerwa.
Yakawedzera yakasarudzika Hardware yakawedzera encoding.
Yakawedzera kurekodha kweakawanda mavhidhiyo masosi.
Yakawedzera yakawanda yakavandudzwa kukanganisa kubata.
Yakagadziriswa yakaputsika UI mune isiri-default yekuvhara bhatani.
Yakagadziriswa hombe bug muGNOME 41.
Kugadziriswa kunze kwenzvimbo yekusarudza muhuwandu hwakazara.
Yakagadziriswa kuchengetedza kurekodha mune yakavanzika dhairekitori.
Iye zvino inoshanda kune mamwe madesktop enzvimbo uye mamaneja ewindo.
Pedzisa kunyora zvakare kuRust.
Kubva pamusoro, iyo poindi yaanotaura izvozvo inoshanda kune mamwe mamiriro ekufananidzira uye mamaneja ewindo. Ini handina kutarisa zvauri kureva, asi kusvika kuKooha 2.0.0 chete GNOME yakatsigirwa. Uine izvi uye nedzimwe shanduko mupfungwa, zvinoita sekunge zviri kusimukira kuti zvive imwe yesarudzo dzatinofarira dzekurekodha skrini paLinux-based operating system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Kooha 2.0.0 inowedzera rutsigiro rwematafura matsva uye MP4
Yakanakisa mitambo yebhodhi yeGNU / Linux distro yako
Manjaro 2021-09-24 inosvika nePipeWire 0.3.37, LibreOffice 7.2.1 nezvimwe zvinhu zvitsva.